ဗိုက်အောက်ပိုင်းအဆီတွေကျအောင် ဒီစည်းကမ်း (၈) ချက်ကိုလိုက်နာကြမယ် – For her myanmar
ဗိုက်အောက်ပိုင်းအဆီတွေကျအောင် ဒီစည်းကမ်း (၈) ချက်ကိုလိုက်နာကြမယ်
Posted on November 5, 2018 June 11, 2019 Author Hnin Ei Oo	Comment(0)
အယ် လွယ်လွယ်လေးတွေဟ 😬😬😬
ဘိုင်(ပိုက်ဆံ)တွေ၊ စိတ်ဓာတ်တွေကျတိုင်းသာ ဗိုက်ခေါက်တွေကျမယ်ဆိုရင် အခုလောက်ဆို ဗိုက်ကလေးချပ်ရပ်ပြီး အဇမ်းတွေ လှပနေလောက်ပြီ -_- အခုများတော့ ကျန်တာတွေပဲ ကျနေတာ ဗိုက်လေးခမျာ ကျပါ ကျပါလို့ပြောရင်တောင်မှ တုပ်တုပ်ကမလှုပ် :'( တကယ်တမ်းကျတော့ ဗိုက်အောက်ပိုင်းအဆီဆိုတာ ချရခက်တာမှန်ပေမဲ့ လုံးဝမကျနိုင်ဘူးဆိုတာမျိုးတော့ မဟုတ်ပါဘူးနော်။ ဒီလိုရိုးရိုးတန်းတန်း စည်းကမ်းလေး (၈) ချက်ကို လိုက်နာရုံနဲ့ ချရခက်တဲ့ အဆီတွေကို ဘိုင့်ဘိုင်လုပ်လို့ရပါပြီ။
(၁) ကိုယ် တစ်နေ့စားတဲ့ ကယ်လိုရီကို လျှော့ချပါ။
အစားလျှော့ခိုင်းတာ မဟုတ်ဘဲ ကယ်လိုရီ လျှော့ခိုင်းတာပါနော်။ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်ပြီး အဆီပါဝင်မှုနှုန်း၊ သကြားနဲ့ အချိုဓာတ်ပါဝင်မှုနှုန်း များတဲ့ အစားအစာတွေ၊ အသင့်စား အာလူးကြော်တွေ၊ အစားအစာလေးတွေကို ရှောင်သင့်ပါတယ်။ ကိုယ်တစ်နေ့စားမယ့် ကယ်လိုရီကို ၁၀၀၀ ထက်ပိုပြီး မစားပါနဲ့။
စိတ်ဖိစီးမှု (Stress) တွေက ခန္ဓာကိုယ်တွင်းက cortisol ဆိုတဲ့ ဟော်မုန်းကို ပိုမြင့်တက်စေပါတယ်။ Cortisol ဟော်မုန်းက ဗိုက်အောက်ပိုင်းမှာ အဆီတွေကို ပိုစုစေတဲ့ ဟော်မုန်းပါ။ အဲဒီ ဟော်မုန်းကို ကျန်းမာရေးနဲ့ မညီညွတ်တဲ့ နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံနဲ့ ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါ ဗိုက်အဆီကျဖို့ လုပ်ငန်းစဉ်ကတော့ ကမ်းမမြင်လမ်းမမြင်ပါပဲ။
(၃) လ္ဘက်ရည်ကြမ်း (ဂရင်းတီး) သောက်ပါ။
ဂရင်းတီးဆိုတာ ဗိုက်အောက်ပိုင်း အဆီတွေကို ကျစေတဲ့ အကောင်းဆုံးအရည်တစ်မျိုးမို့ ခါတိုင်း သောက်နေကျ အချိုရည်တွေအစား ဂရင်းတီးကိုသောက်ပါ။ ဂရင်းတီးမှာ catechin လို့ခေါ်တဲ့ ဒြပ်ပေါင်းတစ်မျိုးပါဝင်ပြီး အဲဒီဒြပ်ပေါင်းက ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဇီဝဖြစ်စဉ်ကို ပိုပြီးတော့ တိုးတက်စေပါတယ်။ လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေအရ တစ်နေ့ကို ဂရင်းတီးနှစ်ခွက်စီ သောက်သုံးတဲ့လူတွေက မသောက်သုံးတဲ့လူတွေထက် အဆီပိုတွေကို ပိုပြီး ချေဖျက်နိုင်တယ်လို့ ဆိုထားကြပါတယ်။
(၄) လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို တစ်လှည့်စီ လုပ်ပေးပါ။
လေ့ကျင့်ခန်းဆိုရင် ပုံမှန်နေ့တိုင်း ဒါပဲထပ်ထပ်ပြီး လုပ်နေတာထက်စာရင် ကြားဖြတ်ဖြတ်ပြီး အသစ်လေးတွေ စမ်းလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။ (ဥပမာ နှလုံးခုန်နှုန်းမြန်စေတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း (cardio) လုပ်နေကျလူကလည်း တစ်ခါတလေမှာ အလေးတွေ မ,ပေးသင့်သလို အလေးမ,နေကျလူကလည်း cardio လေးတွေ ပြောင်းလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။) ဒီလိုကြားဖြတ်လေ့ကျင့်ခန်းတွေက ကယ်လိုရီတွေကို ပိုမိုလောင်ကျွမ်းစေပါတယ်။
ရေက ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ အဆိပ်အတောက်တွေကို ဖြေဖျောက်ပေးလို့ အသားအရေကို ကြည်လင်ဝင်းပစေတဲ့အပြင် အဆီပိုတွေကိုလည်း ကျစေပါတယ်တဲ့။ အစားမစားခင် နာရီဝက်အလိုမှာ ရေသောက်ပေးရင် ထမင်းစားချိန်မှာ ဘာညာအရည်သောက်ချင်တဲ့စိတ်တွေကို လျှော့ချပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
Related Article >>> ရိုးရိုးလ္ဘက်ရည်ကြမ်း Vs ဂရင်းတီး
(၆) အယ်လ်ကိုဟော ရှောင်ပါ။
အယ်လ်ကိုဟောဆိုတာ ဘာလဲ သိတယ်ဟုတ်? ရှည်ရှည်ဝေးဝေးတွေ မပြောတော့ဘူး 😛 ဘာလို့ရှောင်ခိုင်းလဲဆိုတော့ အဲဒီ အယ်လ်ကိုဟောမှာ ဗိုက်နဲ့ခါးနားတစ်ဝိုက်ကို အဆီစုသွားစေတဲ့ ကယ်လိုရီနဲ့ အဆီတွေ အများကြီးမှ အများကြီး ပါဝင်နေလို့ပါပဲ။ ဒါကြောင့် ဒီလိုအဆီလေးတွေ ကျချင်တယ်ဆိုရင်တော့ မသောက်ခင် သေချာစဉ်းစားပါ။
(၇) လေ့ကျင့်ခန်း ကောင်းကောင်းလုပ်ပါ။
အစားတွေ ဘယ်လောက်ပဲ လျှော့နေပါစေဦး လေ့ကျင့်ခန်းမကူရင် ဒီဗိုက်အဆီကျဖို့ဆိုတာ စိတ်ကူးနဲ့တောင် ယဉ်ကြည့်လို့မရပါဘူးနော်။ လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ ရေကူးခြင်း၊ အေရိုးဗစ်ကခြင်းနဲ့ zumba ကခြင်းတွေက လေ့ကျင့်ခန်းတွေထဲမှာ ဗိုက်အောက်ပိုင်းအတွက် အထိရောက်ဆုံး လေ့ကျင့်ခန်းတွေပါပဲ။
Related Article >>> အဆီကျလှပစေမယ့် အိမ်တွင်းလေ့ကျင့်ခန်းများ
(၈) ထမင်းကို အချိန်မှန်စားပါ။
တချို့ယောင်းလေးတွေရှိတယ် ညစာလုံးဝဖြတ်ထားတယ်တို့၊ နေ့လယ်စာ မစားဘူးတို့ စသည်ဖြင့်ပေါ့။ အဲလိုမျိုးတွေ လုံးဝ လုပ်လို့မရပါဘူးနော်။ လူတစ်ယောက်က တစ်နေ့ကို ပုံမှန် ထမင်း ၃ နပ်စာနဲ့ သွားရည်စာ ၆ခါ စားလို့ရပါတယ်။ အရေးကြီးတာက တစ်ခါစားရင် အများကြီး မဖြစ်ဖို့နဲ့ သွားရည်စာတွေကိုလည်း အဆီနဲ့ အချိုများတဲ့ အစားအစာတွေ မစားမိဖို့ပဲ အရေးကြီးတာပါ။ တစ်ထိုင်တည်းနဲ့ အများကြီးစားတာထက် နည်းနည်းစီ နှဲ့နှဲ့ပြီးသွင်းတာက ဝိတ်ချတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်ကို ပိုပြီးထိရောက်စေတယ်လေ။ (ဟိဟိ စားလို့ရပြီတဲ့ :P)
ကဲ ဒီစည်းကမ်းချက်တွေကို လိုက်နာနိုင်ရင်တော့ ချရခက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ဒီဗိုက်ခေါက်ကြီးလည်း ဘာခံနိုင်မှာလဲနော့်။ အရေးကြီးတာက စိတ်ရှည်ဇွဲရှိပြီး ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ ပန်းတိုင်ကို ရောက်အောင်သွားမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်မျိုး ရှိဖို့ပါပဲ။ ဘယ်အရာမဆို မဖြစ်ဘူး ဆိုတာမျိုး မရှိပါဘူး၊ မဖြစ်သေးတာပဲရှိတာပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် တကယ်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကို ယုံကြည်မှုရှိပါယောင်းရေ။
References : stylecraze, Cortisol, Catechin
ဘိုငျ(ပိုကျဆံ)တှေ၊ စိတျဓာတျတှကေတြိုငျးသာ ဗိုကျခေါကျတှကေမြယျဆိုရငျ အခုလောကျဆို ဗိုကျကလေးခပျြရပျပွီး အဇမျးတှေ လှပနလေောကျပွီ -_- အခုမြားတော့ ကနျြတာတှပေဲ ကနြတော ဗိုကျလေးခမြာ ကပြါ ကပြါလို့ပွောရငျတောငျမှ တုပျတုပျကမလှုပျ :'( တကယျတမျးကတြော့ ဗိုကျအောကျပိုငျးအဆီဆိုတာ ခရြခကျတာမှနျပမေဲ့ လုံးဝမကနြိုငျဘူးဆိုတာမြိုးတော့ မဟုတျပါဘူးနျော။ ဒီလိုရိုးရိုးတနျးတနျး စညျးကမျးလေး (၈) ခကျြကို လိုကျနာရုံနဲ့ ခရြခကျတဲ့ အဆီတှကေို ဘိုငျ့ဘိုငျလုပျလို့ရပါပွီ။
(၁) ကိုယျ တဈနစေ့ားတဲ့ ကယျလိုရီကို လြှော့ခပြါ။
အစားလြှော့ခိုငျးတာ မဟုတျဘဲ ကယျလိုရီ လြှော့ခိုငျးတာပါနျော။ ကနျြးမာရေးနဲ့ ညီညှတျပွီး အဆီပါဝငျမှုနှုနျး၊ သကွားနဲ့ အခြိုဓာတျပါဝငျမှုနှုနျး မြားတဲ့ အစားအစာတှေ၊ အသငျ့စား အာလူးကွျောတှေ၊ အစားအစာလေးတှကေို ရှောငျသငျ့ပါတယျ။ ကိုယျတဈနစေ့ားမယျ့ ကယျလိုရီကို ၁၀၀၀ ထကျပိုပွီး မစားပါနဲ့။
စိတျဖိစီးမှု (Stress) တှကေ ခန်ဓာကိုယျတှငျးက cortisol ဆိုတဲ့ ဟျောမုနျးကို ပိုမွငျ့တကျစပေါတယျ။ Cortisol ဟျောမုနျးက ဗိုကျအောကျပိုငျးမှာ အဆီတှကေို ပိုစုစတေဲ့ ဟျောမုနျးပါ။ အဲဒီ ဟျောမုနျးကို ကနျြးမာရေးနဲ့ မညီညှတျတဲ့ နထေိုငျစားသောကျမှုပုံစံနဲ့ ပေါငျးလိုကျတဲ့အခါ ဗိုကျအဆီကဖြို့ လုပျငနျးစဉျကတော့ ကမျးမမွငျလမျးမမွငျပါပဲ။
Related Article >>> ကိုယျမှနျးထားတဲ့ ခန်ဓာကိုယျကို မရနိုငျသေးတဲ့ အကွောငျးရငျး (၇)ခကျြ
(၃) လ်ဘကျရညျကွမျး (ဂရငျးတီး) သောကျပါ။
ဂရငျးတီးဆိုတာ ဗိုကျအောကျပိုငျး အဆီတှကေို ကစြတေဲ့ အကောငျးဆုံးအရညျတဈမြိုးမို့ ခါတိုငျး သောကျနကြေ အခြိုရညျတှအေစား ဂရငျးတီးကိုသောကျပါ။ ဂရငျးတီးမှာ catechin လို့ချေါတဲ့ ဒွပျပေါငျးတဈမြိုးပါဝငျပွီး အဲဒီဒွပျပေါငျးက ခန်ဓာကိုယျရဲ့ ဇီဝဖွဈစဉျကို ပိုပွီးတော့ တိုးတကျစပေါတယျ။ လလေ့ာတှရှေိ့ခကျြတှအေရ တဈနကေို့ ဂရငျးတီးနှဈခှကျစီ သောကျသုံးတဲ့လူတှကေ မသောကျသုံးတဲ့လူတှထေကျ အဆီပိုတှကေို ပိုပွီး ခဖြေကျြနိုငျတယျလို့ ဆိုထားကွပါတယျ။
(၄) လကေ့ငျြ့ခနျးတှကေို တဈလှညျ့စီ လုပျပေးပါ။
လကေ့ငျြ့ခနျးဆိုရငျ ပုံမှနျနတေို့ငျး ဒါပဲထပျထပျပွီး လုပျနတောထကျစာရငျ ကွားဖွတျဖွတျပွီး အသဈလေးတှေ စမျးလုပျပေးသငျ့ပါတယျ။ (ဥပမာ နှလုံးခုနျနှုနျးမွနျစတေဲ့ လကေ့ငျြ့ခနျး (cardio) လုပျနကေလြူကလညျး တဈခါတလမှော အလေးတှေ မ,ပေးသငျ့သလို အလေးမ,နကေလြူကလညျး cardio လေးတှေ ပွောငျးလုပျပေးသငျ့ပါတယျ။) ဒီလိုကွားဖွတျလကေ့ငျြ့ခနျးတှကေ ကယျလိုရီတှကေို ပိုမိုလောငျကြှမျးစပေါတယျ။
ရကေ ခန်ဓာကိုယျမှာရှိတဲ့ အဆိပျအတောကျတှကေို ဖွဖြေောကျပေးလို့ အသားအရကေို ကွညျလငျဝငျးပစတေဲ့အပွငျ အဆီပိုတှကေိုလညျး ကစြပေါတယျတဲ့။ အစားမစားခငျ နာရီဝကျအလိုမှာ ရသေောကျပေးရငျ ထမငျးစားခြိနျမှာ ဘာညာအရညျသောကျခငျြတဲ့စိတျတှကေို လြှော့ခပြေးနိုငျပါလိမျ့မယျ။
Related Article >>> ရိုးရိုးလ်ဘကျရညျကွမျး Vs ဂရငျးတီး
(၆) အယျလျကိုဟော ရှောငျပါ။
အယျလျကိုဟောဆိုတာ ဘာလဲ သိတယျဟုတျ? ရှညျရှညျဝေးဝေးတှေ မပွောတော့ဘူး 😛 ဘာလို့ရှောငျခိုငျးလဲဆိုတော့ အဲဒီ အယျလျကိုဟောမှာ ဗိုကျနဲ့ခါးနားတဈဝိုကျကို အဆီစုသှားစတေဲ့ ကယျလိုရီနဲ့ အဆီတှေ အမြားကွီးမှ အမြားကွီး ပါဝငျနလေို့ပါပဲ။ ဒါကွောငျ့ ဒီလိုအဆီလေးတှေ ကခြငျြတယျဆိုရငျတော့ မသောကျခငျ သခြောစဉျးစားပါ။
(၇) လကေ့ငျြ့ခနျး ကောငျးကောငျးလုပျပါ။
အစားတှေ ဘယျလောကျပဲ လြှော့နပေါစဦေး လကေ့ငျြ့ခနျးမကူရငျ ဒီဗိုကျအဆီကဖြို့ဆိုတာ စိတျကူးနဲ့တောငျ ယဉျကွညျ့လို့မရပါဘူးနျော။ လမျးလြှောကျခွငျး၊ ရကေူးခွငျး၊ အရေိုးဗဈကခွငျးနဲ့ zumba ကခွငျးတှကေ လကေ့ငျြ့ခနျးတှထေဲမှာ ဗိုကျအောကျပိုငျးအတှကျ အထိရောကျဆုံး လကေ့ငျြ့ခနျးတှပေါပဲ။
Related Article >>> အဆီကလြှပစမေယျ့ အိမျတှငျးလကေ့ငျြ့ခနျးမြား
(၈) ထမငျးကို အခြိနျမှနျစားပါ။
တခြို့ယောငျးလေးတှရှေိတယျ ညစာလုံးဝဖွတျထားတယျတို့၊ နလေ့ယျစာ မစားဘူးတို့ စသညျဖွငျ့ပေါ့။ အဲလိုမြိုးတှေ လုံးဝ လုပျလို့မရပါဘူးနျော။ လူတဈယောကျက တဈနကေို့ ပုံမှနျ ထမငျး ၃ နပျစာနဲ့ သှားရညျစာ ၆ခါ စားလို့ရပါတယျ။ အရေးကွီးတာက တဈခါစားရငျ အမြားကွီး မဖွဈဖို့နဲ့ သှားရညျစာတှကေိုလညျး အဆီနဲ့ အခြိုမြားတဲ့ အစားအစာတှေ မစားမိဖို့ပဲ အရေးကွီးတာပါ။ တဈထိုငျတညျးနဲ့ အမြားကွီးစားတာထကျ နညျးနညျးစီ နှဲ့နှဲ့ပွီးသှငျးတာက ဝိတျခတြဲ့ လုပျငနျးစဉျကို ပိုပွီးထိရောကျစတေယျလေ။ (ဟိဟိ စားလို့ရပွီတဲ့ :P)
ကဲ ဒီစညျးကမျးခကျြတှကေို လိုကျနာနိုငျရငျတော့ ခရြခကျပါတယျဆိုတဲ့ ဒီဗိုကျခေါကျကွီးလညျး ဘာခံနိုငျမှာလဲနေျာ့။ အရေးကွီးတာက စိတျရှညျဇှဲရှိပွီး ကိုယျဖွဈခငျြတဲ့ ပနျးတိုငျကို ရောကျအောငျသှားမယျဆိုတဲ့ စိတျဓာတျမြိုး ရှိဖို့ပါပဲ။ ဘယျအရာမဆို မဖွဈဘူး ဆိုတာမြိုး မရှိပါဘူး၊ မဖွဈသေးတာပဲရှိတာပါ။ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ တကယျလုပျနိုငျတယျဆိုတာကို ယုံကွညျမှုရှိပါယောငျးရေ။
Tagged belly, fats, Fitness, Food, lower, stress, stubborn, tips
Posted on May 21, 2019 May 21, 2019 Author Hnin Ei Oo
နံပါတ် ၃ အချက်ကိုတော့ ယောင်းတို့ကြိုက်မှာသေချာတယ် 😋😋😋
Posted on March 14, 2018 March 14, 2018 Author Hnin Ei Oo
Gym ဆော့ပြီး မောမောနဲ့ အမောပြေလေးဆိုပြီး အားဖြည့်အချိုရည်တွေ သောက်နေမိတာ.. ခုတော့…
Posted on January 1, 2019 Author Hnin Ei Oo
လက်ထပ်ခါနီး အပျော်ခရီးမှာ အလှကြီးလှနေတဲ့ ပရီယန်ကာချိုပရာ